I-Botnet Infection: Yintoni Oyaziyo Ngale Nkinga? - Iingcebiso ze-Semalt kunye neeTricks
I-botnet, eyaziwa njengethungelwano lwe-bot okanye ibutho le-zombie, inethiwekhi enkulu yeekhomputha ze-HIV. I-malware iyayilahla le khompyutha kwaye ikhonza abahlaseli. Bavame ukulawula ukususela kumakhulu ukuya kumawaka eekhomputha kunye nezixhobo eziphathekayo, kwaye iibhotshi zisetyenziselwa ukuthumela ugaxekile, ii-virus kunye ne-malware kwimibutho. Banceda ekuthatheni ulwazi lomntu kunye nokuhlaselwa kweDDoS. U-Jack Miller, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko kuMphathi weNtengo, uthe iibhotela zibhekwa njengenye yezinto ezisongela kwi-intanethi kwaye kufuneka zilahlekelwe ngokukhawuleza - postagem correios rastreamento de sedex.
Zivela phi iibhota?
Ukuze ube yinxalenye yebhokisi, ikhompyutha ifumanekileyo ifumaneke nge-malware okanye intsholongwane echaphazelekayo enokuqhagamshelana nomncedisi we-remover okanye amanye ama-computer akhulelweyo kwinethiwekhi. Bavame ukufumana ulawulo lwefowuni kwaye basebenzise ukuthumela imiyalelo evela kubaqhibi ukwenza imisebenzi ethile. Hackers kunye nezigebengu ziba amagama abasebenzisi, amaphasiwedi kunye nolunye ulwazi ngoncedo lwe-botnets. Izifo ezibangelwa i-botnet malware ayifani nentsholongwane yemveli ye-malware.
Siyazi njani iibhennetshi?
Siyakwazi ukubona iibhennethi ngokulula xa iikhomputha okanye izixhobo eziphathekayo zitheleleka ngendlela efanayo. Imiqondiso ebonisa ukuba ikhompyutha yakho isulelekile iquka ukuhamba ngokukhawuleza kwikhomputha yakho, ii-imeyili ezingaqhelekanga, izenzo ezingavumelekanga, imilayezo yephutha, kunye neefayile ezingakwazi ukuvula ngokufanelekileyo. Le yimiqondiso enokwenzeka ukuba umntu uzama ukweba idatha yakho kwaye uye wagxotha ikhompyutha yakho kude njengenxalenye yamanethiwekhi. Ukuba inkqubo yakho yekhompyutheni iyancipha, mhlawumbi uya kuba lixhoba lebhokisi.
njani ukusindisa iikhomputha zethu kwiibhota?
Sinokususa iikhomputer zethu kumanethiwekhi e-botnet ngokufaka iinkqubo ezithile ezichasayo okanye ezinqulo lwe-antivirus ezingasusa ezininzi i-bots kumadivayisi ethu kunokwenzeka. Indlela efanelekileyo kukusebenzisa i-antivirus scans kwiikhomputha zethu rhoqo. Unokuzama kwakhona izixhobo zokulwa ne-botnet ezisusa ngokukhawuleza i-malware kwi-system yakho.
iindlela ezilula kunye nezilula zokukhusela i-malnet ye-botnet:
Kufuneka ufake ifayile ye-antitivirus ethembekileyo neyenamandla kwikhompyutheni yakho okanye kwisixhobo esiphezulu
Kufuneka usethe izicwangciso zesofthiwe
Kufuneka uqaphele xa uvula okanye ucofa into ethile kwi-intanethi
Ukukhusela iikhompyutheni ekubeni yi-Zombies kwimikhosi ye-botnet, kufuneka ukhuphe ukukhuphela iinkqubo kunye neefayile ezixhasayo. Ngaphezu koko, akufanele ucofe kwiikhonkco ezingaziwayo okanye iifayile ezivulekileyo ze-imeyile ongaziwayo. Njalo khumbula ukuba zonke ezi zinto zinokuthi ziqulethe i-bots kwaye zikhona ukusulela iifowuni zakho. Kwakhona, kufuneka ugcine iiphequluli zakho, iifestile, kunye neenkqubo ze-antivirus ezihlaziyiweyo kwaye ugcine iliso kumgangatho kunye nokuhlaziywa kweempawu zokuphepha zakho. Khusela isixhobo sakho ngeenkqubo ezinamandla ze-antivirus ezifana ne-Avast Antivirus software. Inceda ukukhusela ikhompyutha yakho okanye ifowuni yesistim ekubeni ikhuselwe yi-malware, i-botnets kunye ne-virus.